Museveni: "hal sano ha la kordhiyo" - BBC Somali
Museveni: "hal sano ha la kordhiyo"
Madaxweynaha Uganda, Yuweri Museveni, ayaa ku baaqay in Hey'adaha Dowladda Soomaaliya loo kordhiyo muddo sannad ku kooban.
Madaxweynaha oo la hadlayay ergooyinka ka qeyb galay shirka International Contact Group oo Soomaaliya ka hadlayay, ayaa waxaa uu ku tilmaamay in Soomaaliya aanay hadda u baahnayn doorasho ay qabtaan dad aan iyaga la soo dooran, ee ay u baahan yihiin nabad.
Image caption Dr. Augustine Mahiga
Dr. Augustine Mahiga, oo ah ergeyga gaarka ah ee Xogahayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabbilsan Soomaaliya, ayaa isagu ku tilmaamay in muranka ku saabsan kordhinta xilliga baarlamaanka iyo kan xukuumaddu uu cuuryaamiyay wadashaqeynta labada hey'adood laga soo billaabo bishii February.
Mahiga wuxuu yiri, dhibaatadan oo kale waxay dhacday sannadkii hore, intii u dhexeysay August iyo November.
Markaa waxaa lagu muransanaa, ayuu yiri, xulashada Ra'iisal Wasaare iyo xukuumad cusub.
Waxaa la dhihi karaa, ayuu raaciyay, wax wada shaqeyn lagu tilmaami karo waxaa keliya oo la helay intii u dhexeysay November iyo january.